SomaliTalk.com » Nasiib badanaa R/Wasaare Cumar C/Rashid: Badda Soomaaliya
Daabaco | Print | Faafin: SomaliTalk.com: Monday, October 19, 2015 // 3 Jawaabood
”Xaajo nimaan ogeyn indhahuu ka ridaa: Xeerka cusub ee badda Soomaaliya”
Hubsiimo hal baa la siistaa: Xeerka cusub ee badda Soomaaliya
Xuduuddii badda in aan lagu soo xadgudbin oo ay sideedii ahaato.
Xuduuddii badda Soomaaliyeed oo wax laga beddelo.
Iyadoo tii eebbana aysan meesha ka maqnayn waxaan shaki ku jirin in doorka R/wasaare Cumar C/Rashid ku leeyahay ama ka qaato dacwada Kenya laga geeyey ay lug ku yeelanayso labada natiijo ee kor ku xusan hadba tii uu xaalku ku dambeeyo, ilaahey tan hore ha nooga dhigee !
Waxay ka tusaale qaadaneysaa dacwad middaan la mid ah oo u dhaxeeysa dawladda Shiinaha (China) iyo Filibiin (Philippines). Dawladda Filibiin ayaa dacwad la mid ah tan Soomaaliya oo ah in dawladda China baddeeda ku xadgudubtay oo baaritaan shidaal ka waddo hor geysey maxakammadda badaha ee Hague. China sida Kenya oo kale ayay ku doodeysaa in ay wada hadal la gashay dawladda Filibiin oo aysan dacawadda maxkamadda loo baahnayn sideedaba. Dawladda China waxay ku doodeysaa in aan loo baahnayn in la caalamiyeeyo murankan badda ee wada hadal hoose lagu dhameeyo. Dawladda Shiinaha waxay ku xoojineysaa dooddeeda inay is-afgarad iyo wada hadal horey ula gashay dawlado kale sida Japan isla markaasna sidoo kale ay dawladda Filibiin wada hadal ku dhamaynayaan murankooda dhinaca badda ah. Qoraal ka hadlaya dacwadaas iyo xeeladda dawladda China isticmaaleysaba halkaan ayaad ka akhrisan kartaa. http://thediplomat.com/2015/07/how-china-views-the-south-china-sea-arbitration-case/
Arrinka labaad oo la xiriira arrinta kowaad waa kalsooni ay dawladda Kenya ku qabto in heshiiskii is-afgaradka ee mudane Cumar C/Rashid dawladdiisu u saxiixday dawladda Kenya uu ka caawin karo inaan dacwada lagu xallin maxkamad sharci ah horteeda. Sida dawladda China ay soo jeedisay oo kale waxay Kenya ku doodi kartaa in wada hadal toos ah oo dhex mara labada dawladood ama mid ay dhex-dhexaadiyaan dawladaha gobolka sida IGAD dacwad lagu beddelo.
Dawladda Kenya waxay diidmadeeda ah in dacwad laga geeyo ay daba dhigtay abaal sheegasho ah in dhiig iyo dhaqaale badan kaga baxay nabadeynta Soomaaliya isla markaasna ay heyso qaxooti badan oo Soomali oo aysan mudanayn in dacwada badda la hor geeyo maxkamad balse lagu dhameeyo wada hadal hoose. Waxay rajaynaysaa in qayb bulshadeenna ka mid ah (sida haddaba dhacday) ay abaal sheegashadaas iyo xiriirka labada shacab ka dhexeeya ugu dhega nuglaadaan una isticmaalaan in laga tanaasulo mawqifka aan ku difaaceynno baddeenna ee ah maxakamadda horteeda. Waana mid la mid ah xaaladda Filibiin haysata.
Waxaan si aad ah ugu mahadnaqayaa Xeer Ilaaliyahay Guud ee Qaranka, Dr. Axmed Cali Daahir oo markii horena dacwada gudbinteeda si fiican u gutay haddana qoraal jawaab bixin ah ka soo saaray diidmada dawladda Kenya ee ku aaddan in la joojiyo dacwada. Waxaan aad ugu farxsan ahay sida qoraalkiisa uu ugu faah-faahiyey in dacwadan aysan waxba ka khusayn xiriirka labada waddan iyo labada shacab ee Soomaaliya iyo Kenya oo aynaan marna uga tanaasulayn in dacwada maxkamadda horteeda loogu kala baxo.
Abukar Y. Warsame
3 Jawaabood " Nasiib badanaa R/Wasaare Cumar C/Rashid: Badda Soomaaliya "
Ahmed Omar Abshirow says:
Sunday, November 8, 2015 at 10:43 am
Asc. Slkn kadib, marka hore waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa Ilaahay ina abuuray, tankale, waxaan mahad ballaaran uso jeedinaya Somalitalk.com oo har iyo habeen u taagan badbaadinta baddeena. haddii aan guda gelo fikirkeyga, waxaan is leeyahay waa suuragal dowlado iyo shaqsiyaad Soomali ku abtirsada inay isku dayaan in badeenii lumiyaan balse waxaan aamin sanahay in hal wiil oo Soomaali dareen wadaniyadeed xambaarsan uu jiro badeena lama gedan karo. waa nasiib darrasade in Madaxdeenii Soomaaliyeed oo maanta talada iyo awooda gacantooda ilaah u geliyay oo haddana uga faa’iideyn umadooda iyo dhulkooda.
Badeeby waa badbaaday insha allaah ee qof waliba damiir wadaniyadeed uu ku jiro ayaan ka rajeyneynaa in uu ka dhiidhiyo duco iyo dadaal isugu daro insha Allaah.
Sunday, October 25, 2015 at 5:39 pm
Asalama Alleykum wr br.
Marka hore waan u mahad celinayaa qoraaga dadaalka uu sameeyey in kastoo wax ka dhiman yihiin.
Waa muhiim in badda la wada difaaco balse muhiim misna waxaa aha in la ogaado meesha wax ka khaldan yihiin, oo qof kasta sameeyo research dhan walba. Heshiiskii is af-garad waxaa burburiyeey barlamaankii hore, waxaana qoray warqada gacantiisa Cumar in aay barlamaanku ka noqdeen heshiis kaas. UN ku waxuu ka soo qaaday heshiis kaas Null and Void. Marka arintaan hada jirta heshiis kaas looma cuskan karo, Kenyana waxaay sheegayso waxba kama jirto oo aay leedahay heshiis baan soomaaliya la galnay 2009. Heshiiska Kenya ka hadlayso waa heshiis aay la galeen dowladda hada jirta, waana heshiis qarsoodi ah. Hadii aad aqridi warqada Madaxweeynaha Hassan qoray July 2014 UN ku jirta, waxaa kaga cad in heshiis kii is af-garad dib loo soo cusboonaaysiiyey. Kaga daranka madaxweeynuhu waxuu documents Norway soo diyaarisey iyo warqada uu qoray labadaba ku bur buriyeey Sharciga Qaran law no 37. Waxuuna ku sheegay warqadiisa in biyaha soomaaliya 12 nm yihiin, taas oo ka hor imaanaysa sharciga law no 37. Documents Norway diyaarisay hadii aan dib u eegno July 2015 waxaa lagu sameeyey amended. Waxaana ku qoran oo lagu soo kor dhiyey in Tansania soomaaliya la galayaan heshiis. Waxaan shaki ku jirin, in uu dhacay heshiis qarsoodi ah. Kaas oo Kenya qarinayaan. Waxaana hormuud u ah madaxweeyna dalka. Dabcan Cumar iyo Jawaari waa la og yihiin. Marka dadka soomaaliyeed ha u cadaato in madaxda dalku wada gadanayaan badda. Dhamaantood waxaay galeen khiyaano qaran oo soo jiitamaysey ilaa 2009.
Wednesday, October 21, 2015 at 12:38 am
Kenya weligeedba waxa ay naga haysate oo nooga maqna dhul iyo dad weligeey ma’ana maqlin dowlad somliyeed iyo shacabkeedi toona oo ka hadleeysa. 1964 kenya dhulka Nfd. Si sahlan oo aan dhiig kudaanin bay kuqaadaty, waxaana sabab u aha damiir xumidii hogaamiyaashi xukumadda somaliyeed marka jirta.Hadda waxaa un dhace khaladkii oo kale. marka maxa ay ina cumar cabdi rashiid iyo madhaxdii hore ku kala duwanyihiin.timir lafbaa kujirta, baroorta orgigaa kaweyn! Ma dhulka iyo dadka somaliyeed ee ladayacay aanan aheyn wax laga hadlo oo ladaneeyo? mise badda aya ka mudan oona ka qiimo badan in laga hadlo oo ladaneeyo har iyo habeen, maxaa yeele badda dhaqaala aya laga heliya!